Careers Archives - Nalonetardiary
August 25, 2020 by Nalonetar Diary
“အိမ်သုံးမီတာခ ဘယ်လောက်ကျမလဲ တွက်လို့ ရပြီ” မီးပူ -၁၂၀၀ ဝပ် — ၅.၂ အမ်ပီယာ မီးဖို — ၁၆၀၀ ဝပ် — ၇ အမ်ပီယာ တီဗွီ+စလောင်းစက် — ၄၀၀ ဝပ်.. ၁.၈ အမ်ပီယာ အဝတ်လျှော်စက်–၂၀၀ ဝပ်.. ဝ.၉ အမ်ပီယာ ရေမော်တာ— ၁၂၀၀ ဝပ်…. ၅.၂ အမ်ပီယာ အဲကွန်း….၁၂၀၀ ဝပ်….၅.၂ အမ်ပီယာ မီးသီး+မီးီချောင်း — ၁၅၀ ဝပ်… ဝ.၇ အမ်ပီယာ အခြားအသုံးအဆောင်များ…၅ အမ်ပီယာ..– ၃၁ အမ်ပီယာ အိမ်သုံးမီတာတစ်လုံး၏ခံနိင်ရည် ဝန်အားသည်(5/30) Amp. (10/30) Amp. အများဆုံး ၃၀အမ်ပီယာထိအသုံးခံနိင်ရည်ရှိပြီး အထက်ပါပစ္စည်းများ အားတစ်ပြိုင်နက်သုံးစွဲနေပါက ( … Read more
Categories Careers Tags မီတာခ
ေငြေၾကး ကံေကာင္းလာၿပီး ဝင္ေငြသိသိသာသာတိုးလာေအာင္ ဒီအခ်က္(၅)ခ်က္ကို မေမ့ပါနဲ႕
August 24, 2020 by Nalonetar Diary
Categories Careers Tags ေငြေၾကး လာဘ္ရြင္ေအာင္
အမြင့်ဆုံးအထိ အောင်မြင်ချင်ရင် အသက် ၂၀ အရွယ်မှာ ဒီအကျင့်တွေကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပါ
အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ သူတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ခါးသီးတဲ့ စည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တာထက် ဖြစ်သင့်တာကို ဦးစားပေးပြီး ဆန္ဒကို သိက္ခဏာနဲ့ထိန်းသိမ်းတတ်တဲ့သူတွေ၊ စိတ်ကူးအိပ်မက်ကြီးကြီးမားမားပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူတွေဟာ တစ်ချိန်မှာတော့ တကယ့်ကို လျှမ်းလျှမ်းတောက်အောင်မြင်တဲ့သူတွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ကိုယ်ဝါသနာပါရာလိုင်းတွေမှာ အမြင့်ဆုံးသောအောင်မြင်မှုတွေ ရချင်တဲ့သူတွေအတွက် ၂၀ ကျော်အရွယ်ကနေ စတင် ပြုပြင်သင့်တဲ့ အချက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့စိတ်ကူးတွေ၊ အိပ်မက်တွေရှိတဲ့ လူငယ်တွေအတွက် တကယ်ကို ဖတ်သင့်တဲ့ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ (၁) ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ပြန်ရှင်းပြ မနေပါနဲ့တော့ သင်ဘာကြောင့် ဒီအရာကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ၊ ဒီလမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ခဲ့တာလည်း ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ့်ဘဝအတွက် တကယ်ကို အရေးပါတဲ့သူတွေကလွဲရင် ရှင်းပြမနေပါနဲ့တော့။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပြီးသား၊ ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးသားအရာတွေအတွက် ငါမှားများမှားသွားပြီလားဆိုတဲ့ သံသယတွေ၊ဒွိဟစိတ်တွေကို ဖျောက်လိုက်ပါ။ (၂) ရည်မှန်းချက်တွေကို အာရုံစိုက်ပါ သင့်ဘဝမှာ မကောင်းတဲ့သူတွေ၊ သင့်ကို စိတ်အနှောက်အယှက် … Read more
Categories Careers Tags အောင်မြင်ချင်ရင်
ဘုရားပန်းအိုးလဲတဲ့ခါ ပန်းအရိုးတံပုပ်တာမဖြစ်ပဲ ပန်းကြာကြာခံအောင် ..
ဘုရားပန်းအိုးလဲတဲ့ခါ ပန်းအရိုးတံပုပ်တာမဖြစ်ပဲ ပန်းကြာကြာခံအောင်ပြုလုပ်နည်း လျှို့ဝှက်ချက် ပန်းအိုးထိုးတဲ့အခါ ပန်းတွေ ကြာကြာခံံနေစေမယ့် နည်းလမ်းများ ပန်းအိုးထိုးတဲ့အခါ ပန်းတွေကို ကြာကြာခံနေစေမယ့် နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ အလုပ်စားပွဲမှာ အလှပန်းအိုး ထိုးတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်၊ သင့်အိမ်ဧည့်ခန်းမှာ အလှဆင်တာမျိုးနဲ့ ဘုရားမှာ ပန်းအိုးထိုးပြီး ပန်းကပ် ပူဇော်တဲ့အခါ ပန်းတွေ ခဏလေးနဲ့ ညှိုးနွမ်းခြောက်သွေ့သွားတတ်လို့ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမယ့် နည်းလမ်းတွေကတော့ ပန်းအိုးထိုးတဲ့အခါပန်းတွေ ကြာကြာခံနေစေမယ့် နည်းလမ်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) ပန်းတွေ ဝယ်လာတဲ့အခါ ရေဆေးပြီး ပန်းအိုးထိုးတာမျိုးကို ချက်ချင်း မလုပ်ဘဲ ပန်းအရိုးရဲ့ အောက်ခြေ ပင်စည်ကို ၂ လက်မခန့် ခပ်စောင်းစောင်းလေး ဖြတ်တောက်ပြီးမှ ထိုးပေးသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုပြုလုပ်ပေးခြင်းဟာ ပန်းတွေ ရေစုပ်အား ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး ကြာကြာခံစေပါတယ်။ (၂) ပန်းအိုးထိုးတဲ့အခါ … Read more
Categories Careers Tags ပန်းကြာကြာခံအောင်
ဘုရားပန်းအိုးလဲတဲ့ခါ ပန်းအရိုးတံပုပ်တာမဖြစ်ပဲ ပန်းကြာကြာခံအောင်
ဘုရားပန်းအိုးလဲတဲ့ခါ ပန်းအရိုးတံပုပ်တာမဖြစ်ပဲ ပန်းကြာကြာခံအောင်ပြုလုပ်နည်း လျှို့ဝှက်ချက် ပန်းအိုးထိုးတဲ့အခါ ပန်းတွေ ကြာကြာခံနေစေမယ့် နည်းလမ်းများ ပန်းအိုးထိုးတဲ့အခါ ပန်းတွေကို ကြာကြာခံနေစေမယ့် နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ အလုပ်စားပွဲမှာ အလှပန်းအိုး ထိုးတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်၊ သင့်အိမ်ဧည့်ခန်းမှာ အလှဆင်တာမျိုးနဲ့ ဘုရားမှာ ပန်းအိုးထိုးပြီး ပန်းကပ် ပူဇော်တဲ့အခါ ပန်းတွေ ခဏလေးနဲ့ ညှိုးနွမ်းခြောက်သွေ့သွားတတ်လို့ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမယ့် နည်းလမ်းတွေကတော့ ပန်းအိုးထိုးတဲ့အခါပန်းတွေ ကြာကြာခံနေစေမယ့် နည်းလမ်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) ပန်းတွေ ဝယ်လာတဲ့အခါ ရေဆေးပြီး ပန်းအိုးထိုးတာမျိုးကို ချက်ချင်း မလုပ်ဘဲ ပန်းအရိုးရဲ့ အောက်ခြေ ပင်စည်ကို ၂ လက်မခန့် ခပ်စောင်းစောင်းလေး ဖြတ်တောက်ပြီးမှ ထိုးပေးသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုပြုလုပ်ပေးခြင်းဟာ ပန်းတွေ ရေစုပ်အား ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး ကြာကြာခံစေပါတယ်။ (၂) ပန်းအိုးထိုးတဲ့အခါ … Read more
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ရင္ ဒါေတြလိုပါတယ္
မော်တော်ယာဉ် လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ရင် ဘာတွေလို သက်တမ်း ဘယ်လောက်ရ ဘယ်လောက်ကြိုတိုး ရသလဲဆိုတာ အစ်ကိုတို့ အစ်မတို့ရေ ပို့ဆက် (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းရုံးလို့ ခေါ်ခဲ့ကြတဲ့ မော်တော်ယာဉ်တွေရဲ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေ ထုတ်ပေးတဲ့ ရုံးကို ကညန လက်အောက်ခံ မဟုတ်တော့ဘဲ ပို့ဆောင်ရေး စီမံကိန်းဦးစီဌာနအဖြစ် 1.8.2020 ရက်နေ့မှစ၍ သီးခြား အဆင့်တိုးမြှင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်တာမို့ ပို့ဆက်/လုပ်ငန်းရုံးလို့ မပြောတော့ဘဲ ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီဌာနလို့ပဲ သုံးနှုန်းရတော့မယ်နော်။ ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာနကနေ ငါ့ညီ ငါညီမတို့ရဲ့ မော်တော်ယာဉ် လုပ်ငန်း အမျိုးအစားအလိုက် လုပ်ငန်း လိုင်စင်တွေ ထုတ်ပေးတယ်။ မော်တော်ယာဉ် လိုင်း‌တွေကို ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲတယ်။ နိုင်ငံတော်အဆင့် အခမ်းအနားများမှာ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်နော်။ ဦးလေးတို့ အဒေါ်တို့ရဲ့ ကားတွေကို လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့် … Read more
Categories Careers Tags လုပ္ငန္းလိုင္စင္
အိုးနဲ့ ပန်းစိုက်တဲ့ အခါ အိုးထဲကို ဒါတွေထည့်ပါ ..
အိုးအတွင်းစိုက်ပျိုးပင်များအတွက် မြေရောစပ်နည်း ၁။ မြေဆွေးဆိုတာ သစ်ရွက်တို့ မြေနဲ့ အတူ ဆွေးမြေ့ရောနှောသွားသောမြေဟု ယေဘူယျ ခေါ်ရင်ရပါတယ်။ အာ့လို မြေဆွေးမရပါက သစ်ရွက်များဖုံးလွှမ်းခံရသောမြေကို အပေါ်ယံ သုံးလက်မထုလောက်လွှာ၍ ကီလို ၁၀၀လောက် ယူပါ။(ဘိလပ်မြေ အိတ်တစ်လုံး ကီလို ၅၀ရှိပါသည်) ၂။ ဆန်ဆေးရည် ပထမဆေးသောရေကို ဗူး(သို့)မြေအိုးတွင် ထည့်၍ အနည်းဆုံး သုံးရက် ထားပါ။၇ လီတာမွ ၁၀လီတာ။ ၃။ ထန်းလျက် အမည်း (အရက်ချက်ရာတွင်သုံး ) အမည်းမရပါက ရေသာ ထန်းလျက်၂၅ကျပ်သားလောက်ကို နှစ်လီတာလောက်ရအောင်ရေစပ်၍ကြိုပါ။ဗူးထဲထည့်၍ သုံးရက်လောက် သိမ်းထားပါ။မြေ ကီလို ၁၀၀လောက် အသုံးပြုရပါသည်။ ၄။ နွားချေး လင်းနို့ချေး ကြက်ချေး ခိုချေး သင့်ရာ တိရိစ္ဆာန်ချေးကို ခြေထားပါ။ နှစ်ပြည်မှ လေးပြည့်အထိ … Read more
Categories Careers Tags မြေရောစပ်နည်း
အိမ်တွင်းမှာ လုံးဝမစိုက်သင့်တဲ့ နဂါးစက်ဂမုန်း ..
ဒီဖက်ခေတ်မှာ အိမ်တွင်းနဲ့ အိပ်ခန်းတွင်း အလှဆင်ဖို့အတွက် လူတွေက အပင်ငယ်လေးတွေကို အိမ်ထဲမှာ စိုက်ပျိုးလာ ကြပါ တယ်။ အိပ်ခန်းတွေ ထဲမှာ ဆိုရင်လည်း သစ်ပင်က ထုတ်ပေးတဲ့ အောက်စီဂျင်ရဖို့ရယ် မျက်စေ့ပသာဒကျဖို့ အတွက်ရယ် အတွက် အပင်လေးတွေကို စိုက်ပျိုးကြ ပါတယ်။ သစ်ပင်စိုက်တိုင်း ကောင်းလာ ဆိုရင် ကောင်းတာတွေ ရှိသလို မကောင်းတာတွေ လည်းရှိ ပါတယ်။ မြန်မာ့အယူအဆအရဆိုရင် အထူးသဖြင့် ဂမုန်းပင်တွေ ကို စိုက်တဲ့ အခါမှာ အထူးသတိ ထားရ ပါတယ်။ အခုဆိုရင် မလေးရှား ဓာတုဗေဒပညာရှင် တစ်ဦးက ဆင်စွယ်ဂမုန်း အနွယ်ဝင် နဂါးစက်ဂမုန်းကို အိမ်တွင်းမှာ စိုက်ပျိုးမိ ပါက ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ကို ထိခိုက်စေနိုင် တယ်လို့ သိပ္ပံနည်းကျ ဆိုလာပါတယ်။ ဗိုင်းရက်ပိုး … Read more
Categories Careers, Knowledge Tags နဂါးစက်ဂမုန်း
မိန္းခေလးမွန္ရင္သိမ္းထားဖို႕လို႕တဲ့ မိန္းကေလးတိုင္းအတြက္ လွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္ ..
August 17, 2020 by Nalonetar Diary
မိန်းခလေးမှန်ရင်သိမ်းထား 1.မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်မယ်ဆို အောက်ခံ အသားအရည်ကို အရင်ကောင်းအောင်လုပ်ပါ 2.မိတ်ကပ်ကို အိမ်မှာနေရင် မလိမ်းပါနဲ့ 3.မိတ်ကပ်ကို အပြင်သွားပြီး ပြန်လာတာနဲ့ တစ်ခါထဲ ဖျက်ပါ 4.မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့နေ့တွေမှာ မျက်နှာကို သေချာသန့်စင်ပါ ၊မိတ်ကပ် က မျက်နှာသစ် ဆပ်ပြာ တခုသုံးယုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး 5.မိတ်ကပ်ဖျက်မယ်ဆို မိတ်ကပ် remover သုံးပြီးသန့်စင်ပြီးမှ မျက်နှာသစ်ပါ 6.မိတ်ကပ် remover ကို အလေအလွင့်နည်းအောင် ယနေ့ခေတ် အသုံးများလာကြတဲ့ ready made ဂွမ်းလေးတွေ သုံးပြီးဖျက်ပါ 7.ဘူးအသန့်တစ်လုံး သို့မဟုတ် လေလုံအိတ်တစ်လုံးထဲကို ဂွမ်း အရွက် ၂၀ခန့်ထည့်ပါ ပြီးရင် make up remover အရည် နဲနဲလောင်းထည့်ပေးပါ ဒါဆို make upremover ကို နဲနဲပဲကုန်စေနိင်သလို အကျိုးလဲရှိပါတယ် … Read more
Categories Careers, Hearth Tags မိန္းခေလး